प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षको सबै नतिजा सार्वजनिक, को कहाँ विजयी ? पूर्ण विवरण – Contemporary News Portal From Nepal
प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षको सबै नतिजा सार्वजनिक, को कहाँ विजयी ? पूर्ण विवरण
प्रकाशित मिति: २७ मंसिर २०७४, बुधबार २१:२७
काठमाडौं : मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ १६५ क्षेत्रको नतिजा बुधबार बिहान सार्वजनिक भएको हो। विवादका कारण स्थगित भएर ढिलामात्र गणना भएको सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ मा कांग्रेसका विजय गच्छदार विजयी भएसँगै प्रत्यक्षको सबै परिणाम सार्वजनिक भएको हो। अन्नपूर्ण पोस्ट् इलेक्सन पोर्टलमा प्राप्त नतिजा अनुसार एमाले सबैभन्दा बढी ८० स्थानमा विजयी भएको छ। माओवादीले ३६, कांग्रेसले २३, संघीय समाजवादी फोरमले १० र राजपाले ११ स्थान जितेका छन्। पाँच स्थानमा भने अन्य एक सिटे र स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका छन् । नयाँ शक्ति, राप्रपा, राजमो, नेमकिपाले एक सिटमात्र जितेका छन् भने एक सिटमा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका छन्।
को कहाँ विजयी ?
२३.विजयकुमार गच्छदार, सुनिरी-३
२२.अमरेशकुमार सिह सर्लाही -४
डा.बाबुराम भट्टरार्इ, गोरखा-२
राजेन्द्र लिङ्देन, झापा-३
दुर्गा पौडेल, प्यूठान
प्रेम सुवाल, भक्तपुर-१
छक्कबहादुर लामा, हुम्ला
२७ मंसिर २०७४, बुधबार २१:२७ मा प्रकाशित